WMS खेल बाट अमेजन रानी एक क्लासिक छ 20 केही वास्तविक सुन्दर सुविधाहरू payline स्लट. स्ट्याक्ड wilds निश्चित तिनीहरूलाई मध्ये एक छ. र बोनस spins तपाईंलाई एक उत्कृष्ट भूमि गर्न सक्छन् 100 मुक्त spins. यो wilds राउन्ड तपाईं पैसा केही ठूलो रकम जीत मदत निःशुल्क spins समयमा जीवन्त. त्यसैले, पैसा केही भारी मात्रा जीत मौका लागि WMS यो रोमाञ्चक स्लट खेल मा Amazons को रानी सामेल. यो स्लट विशेष गरी ती विशाल जीत chasing ती खेलाडीहरू बनेको छ.
अमेजन रानी मोबाइल मंच गर्न राखिनेछ भइरहेको क्लासिक WMS क्यासिनो स्लट खेल को सूची मा अन्य खेल मिलती. यो WMS स्लट को सहायक को एक गरेको छ, विलियम्स पारस्परिक. रानी आफु खेल मा आश्चर्यजनक देखिन्छ र अन्य ग्राफिक विवरण खेल गुणस्तर थप्न.
तपाईं स्लट खेल धेरै मिल्दोजुल्दो छ जो हरेक स्पिन मा £ 60 20p बीच कहीं शर्त गर्न सक्छन्.
अमेजन रानी को खासियत यो दुवै तरिका खेल्छ भन्ने तथ्यलाई हुन छ. बायाँ तर्फ गर्न दाँया पट्टि बायाँ तर्फ साथै दाहिने तिर देखि i.e. साथै स्ट्याक्ड wilds को खेल दावा सुविधा मदत गर्न सक्छ जो अवतरण तपाईं मुद्रा को एकदम धेरै जीत. जंगली ( यो झरना प्रतीक) को रील देखिने2वा रील3वा रील4र तपाईं विजेता संयोजन भूमि मद्दत अमेजन रानी प्रतीक बाहेक अन्य सबै प्रतीक प्रतिस्थापन गर्न.
यो अमेजन रानी प्रतीक यो खेल मा स्क्याटर प्रतीक हो. रूपमा यसको लागि एक आँखा बाहिर राख्न3वा भन्दा बढी3अमेजन रानी यो केही अचम्मको फ्री Spins हुनेछ रूपमा. इच्छा अमेजन रानी प्रतीक कति पटक देखा कति मुक्त spins तपाईं प्राप्त निर्भर.3प्रतीक तपाईं दस मुक्त spins गर्दा जीत4तपाईं जीत 25 र5विशाल परिणाम छरिन्छ 100 मुक्त spins बोनस. यो 10 र 25 फ्री स्पिन बोनस को गर्दा प्राप्त गर्न एकदम सजिलो 100 आफ्नो तर्फ देखि धैर्य को एक बिट आवश्यक पर्दछ.
निःशुल्क spins आफूलाई retriggered र वस्तुतः असीमित छन् गर्न सकिन्छ. यो यस खेल को अर्को सुन्दर पक्ष हो.
यो तपाईं सम्झना गर्न चाहँदैनन् हुनेछ जंगल एक यात्रा हो!!
अमेजन रानी WMS देखि एक सुपर हिट खेल हो. यो जीत विशाल गर्दै छन् र नै रोमाञ्चक खेल खेल्न. प्राप्त3आसन्न रील मा गोरिल्ला र तपाईं आफैलाई रानी आफु रूपमा धनी हुनुको पाउन सक्छ. धीरज यो खेल महत्वपूर्ण छ, केटा कारण यो खेल जस्तै एक उत्कृष्ट तरिकामा धैर्य इनाम दिनुहुन्छ. त्यसैले, को जंगल मा यो साहसिक सम्झना छैन.